Madaxweyne Obama oo mar kale u goodiyey kuwa Carqaladeynayo Ammaanka Somalia. – idalenews.com
Madaxweynaha Dalka Maraykanka, Barack Husein Obama, ayaa waxa uu shalay saxiixay Amar lagu fulinayo in la sii wado Cunaqabateynta la saarayo dadka loo arko inay Khatar ku yihiin Ammaanka Dalka Somalia.
Obama waxa uu Tilmaamay inay sii wadayaan Xaaladda degdega ah ee Qaranka ee lagu xushmeynayo Somalia, wuxuuna xusay inuu taagersan yahay Dadaalka loogu jiro Degnaanshaha Somalia.
‘’Dowladda Mareykanka waxay si xoogleh hoosta uga xariiqeysaa muhiimadda Degnaanshaha Somalia’’ ayuu yiri Obama oo hoosta ka xariiqay muhiimadda Maraykanka u leedahay Cunaqabateynta lagu soo rogayo Kooxaha Shaqsiyaadka Carqaladeynayo degnaanshaha Somalia.
Hadal ka soo baxay Aqalka Cad ayaa lagu sheegay inuu Madaxweyne Obama mar kale uga digay kuwa Carqaladeynaya Degnaanshaha Somalia inay muteysan doonaan Cunaqabateyn culus.
Hadalka Madaxweynaha ayaa qeyb ka ah taageerada iyo Xushmada uu Maraykanka u hayo Dowladda Somalia oo ay Maraykanka aqoonsatay Bishii January ee sanadkan.
Si kastaba ha ahaatee, Madaxweyne Obama waa markii labaad ee uu saxiixo Dekreeto uu ku muujinayo Xushmadda ay u hayaan Somalia iyo Talaabooyinka Cunaqabateynta oo ay muteysan karaan Kooxaha ama Shaqsiyaadka Carqaladeeya Ammaanka iyo Nabadda Somalia.